सिफारिस – दैनिक अभियान
नारायणपुरको सिद्धरत्ननाथमा बन बिज्ञान क्याम्पस सञ्चालन हुने
नारायणपुर, १९ असार । दाङमा पहिलो पटक बन बिज्ञान बिषयमा अस्नातक तहसम्मको पढाई हुने भएको छ । पोखरा र चितवनपछि दाङमा बन बिज्ञानमा स्नातक तह पढाउने क्याम्पस सञ्चालन हुने भएको हो । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले दाङको घोराही १० नारायणपुरमा रहेको सिद्धरत्ननाथ क्याम्पसमा स्नातक तहमा बन बिज्ञान (फरेष्ट्री) पढाइका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले असार २ गते सरकारको तर्फबाट
तुलसीपुरको स्वाव परिक्षण गर्न प्रतिष्ठानले मानेन
तुलसीपुर १८ असार। तुलसीपुरबाट संकलन गरिएको स्वाब बुधवार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले परिक्षण गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्वाव परिक्षण गर्न अस्वीकार गरेपछि उपमहानगरपालिकाले स्वाव परिक्षण गर्न काठमाडौ पठाउन लागेको हो । ‘सरकारले निजी क्लिनिकलाई तोकेको प्रति व्यक्ति ५ हजार ५ सय शुल्क लिएर मात्रै चेक गर्ने प्रतिष्ठानले अडान लिएपछि स्वाब फिर्ता पठाउँन लगिएको हो बताईएको छ । तुलस
ओलीको दल विभाजन अध्यादेश फेरी ल्याउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई सिफारिश गरेको छ । आज बालुवाटारमा बसेको बैठकले साँझ ५ बजेबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको हो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टीको स्थायी समिति बैठकबाट अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट राजिनामा मागिएपछि संकटमा परेका थए । बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुको उदेश्य दल विभाजन
गढवामा पर्यटकिय स्थलको निर्माण
गढवा, १३ असार । गढवा गाउँपालिका वडानं. १ को कुलपानीमा पर्यटकिय स्थल निर्माण को काम सुरु भएको छ । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पर्यटकिय स्थल निर्माणको काम शुक्रवार देखि सुरु भएको हो । शुक्रवार एक कार्यक्रमका विच कुलपानी धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलमा स्टेप तथा पार्क निर्माण कार्यक्रमको गाउँपालिकाक अध्यक्ष सहजराम यादवले काम सुरु गरेर उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै अध
नेकपामा विवाद : खुम्चिदै ओली , फैलिदै प्रचण्ड !
तुलसीपुर । दुई तिहाई बहुमतमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्नुपर्ने र पास गर्न नहुनेमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड विभाजित भए पछि विवाद उत्कर्षमा पुगको हो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओेली एमसीसीको पक्षमा र पार्टिका कार्यकारी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल,
एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन
हंसपुर । एमसीसी खारेजीकाको माग गर्दै आज युवाहरुले हंसपुरमा विरोध प्रदर्शन् गरेका छन् । एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै एमसीसी विरोधी युवा सञ्जालले आज दाङको बबई गाउँपालिका स्थित हंसपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विभिन्न एमसीसीविरोधी नाराहरु सहित युवाहरुको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा वक्ताहरुले विकासको नाउँमा देशलाई थप पराधीन बनाउँने परियोजना खारेज हुनुपर्ने बताएका थिए । विरोध कार्यक्रममा बोल्
बबई गाउँपालिकाको नीति : दुग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने
हापुरे, ९ असार । बबई गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा दुग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माण् गर्ने योजना बनाएको छ । पशुपालनलाई प्राथामिकतामा राखे पछि दुध उत्पादन हुदा चिस्यान केन्द्र अनिवार्य आवश्यक पर्ने भन्दै पालिकाले चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने बताएको छ । पशुपालन व्यवसाय गरि दुध उत्पादन गरि जिविकोपार्जन गर्ने किसानहरुको दुध र दुग्धजन्य पदार्थलाई वजार सम्मको पहुँच वृद्धि गर्ने उदेश्यले सो न
बबईको नीति : गाउँपालिकामा ग्रिन हाउस निर्माण
हाुपुरे, ९ असार । बबई गाउँपालकाले ग्रिन हाउस निर्माण गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाले कृषि उपजहरुको उत्पादन,प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पु¥याउन ग्रीन हाउस निर्माण गर्ने बताएको छ । साथै कृषि भण्डार गृह र साना सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । पालिकाले ‘कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रीकरण गरी कृषिजन्य उद्योगमार्फत विकासको आधार तयार गर
नागरिकता विधेयक पारित !
काठमाडौं । २ वर्षदेखि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको नागरिकता विद्येयक बहुमतले पारित भएको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधानसहितको विद्येयक पारित भएको हो । पारित विद्येयकमाथि नेपाली कांग्रेस, समाजवादी, राजपा र नेमकिपाले फरकमत राखेका छन् ।
पूर्वमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको माफियाद्वारा हत्या भएको हो –जितेन्द्र देव
तुलसीपुर, ६ असार । पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र देवले रविन्द्र अधिकारीलाई माफियाले मारेको बताएका छन् । ब्रम्हलुट मच्चाउन नपाएर पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई माफियाले दुर्घटनामा पारेर मारेको बताएका छन् । रबिन्द्र अधिकारी ताप्लेजुङ जाने कुनै योजना नभएको चुहान डाडाबाट फर्किने योजना भएको थियो । खास ताप्लेजुङ कसले लगेको हो पत्ता लगाउँनु पर्ने देवले बताएका छन्